Uyilo lweTatoo 2021 - TattooIP.com
Isandla esenziwe ngesandla
Isiqingatha sibuyele umva
Intombi enika umdla kwezesondo
Intombazana ekwishumi elivisayo
Iimpungutye ezilithoba zomsila
Ukuhliselwa phantsi kwehlosi
Intloko y Tiger
Iintaka kunye neentyatyambo
I squid encinci
Intloko yendlovu yomntwana
Ikati emnyama encinci
Umhlobo entlanzi obomvu
I-clover enamagqabi amane
Intyatyambo encinci yeentyatyambo
Umzimba weentyatyambo IsiNgesi
Phezu kwenamba yegxalaba
Umnyama kunye nomhlophe impermanence
Ingelosi eneempiko ezintandathu
Umhlaba ongaphantsi kwamanzi
Iglasi ye wayini
umoya oshushu webhalunu
Intyatyambo encinci ye-vanilla
Umatshini we tattoo
Igazi le pigeon
Iidiliya zaseYurophu naseMelika
Indoda encinci etyheli
Idada encinci emthubi
Iqela leenkwenkwezi ezilishumi elinambini
Imehlo lamehlo onke
ithambile kwaye intle
Ipateni ye tattoo
Ukuba umntwana oneminyaka eli-18 ubudala ukwiminyaka esemthethweni yobudala bokufumana tattoo,Kutheni le nto ezinye iingcali ze tattoo zibalahla xa becela ubuso babo?
Ndandinomntwana oneminyaka eli-18 ubudala eflethini yam ngenye imini esenza uqeqesho kunye neqela lokulungisa njengoko babefaka izixhobo ze-smart kumgangatho wonke njengomgca wendibano.Undibuzile ukuba kuthathe ixesha elingakanani ukwenza ukuba umkho......
Ngaba ungatya ngelixa ufumana tattoo?
Abanye bakufumanisa kuluncedo ukuthatha ukutya okuneswekile kunye nesiselo samanzi (ngakumbi ngexesha leseshini ende),ukuba baziva betyhafile okanye benesiyezi.Iswekile yakho yegazi inokuhla kwaye i-adrenaline yakho ibethile (kuya kuba njalo xa uhlab......
Yeyiphi enye tattoo enokuthi umdwebi we tattoo akavumanga ukukunika?
Xa ndiyifumene ekugqibeleni le tattoo bendiyifuna ndiyifuna ukuba ibe malunga ne-3cm skwere kodwa umculi wala.
Uye wathi ayizukusebenza kakuhle kubungakanani.Njengoko bendiyifumana kwibhanti yam esezantsi / kwicala elisecaleni ubungabinangxaki enk......
Sesiphi isivakalisi esichanekileyo \_"Ndikubonile umzobo wakho ngasemva\_" okanye \_"ndibone umzobo wakho ngasemva\_"?
\_"Ngasemva kwakho\_" kungangathi umntu ukujongile ngathi ndifumene umva wakho.
Ukuba uthetha ngokubhala okanye imifanekiso engene kumqolo wakho njenge tattoo,
ke ikhona iNDLELA yakho ngasemva.
Ngaba ucinga ukuba iittoos zesandla sikaJungkook zimbi?
Hayi.Uthetha i-tattoos ebekwe kwiminwe yakhe ngokufanelekileyo?Inentsingiselo eninzi.Umzekelo:
A ngaphandle komgca ophakathi ujongeka ngathi ujonge ecaleni kwe-......
Ngaba kuya kuba kukungabi nantlonelo ukuba umntu waseMelika afumane tattoo yesitayile saseHawaii?
Andinguye umdabu waseHawaii kodwa ndihlala eHawai'i ixesha elide ngokwaneleyo ukuze ndiphendule umbuzo wakho ngokuthe kratya ngakumbi kunezinye iimpendulo endizifundileyo kubantu abathi ngokucacileyo ayingobantu balapha beHawaii.
Ngaba ungathumela i-selfie ye-tattoo okanye ifoto?
Kutheni le nto umzobi we tattoo angafuni kundenzela itatoo yobuso??Ucebise ukuba ndinyamekele ngee-tattoos zobuso ukuba zingatshintsha izinto ezininzi ebomini bam.Wayethetha ukuthini kanene??
Kwi tattoos ngokubanzi ziyamkeleka ngokwasentlalweni ngoku,kunangaphambili,Nangona kunjalo ii-tattoos zobuso azinamkeli efanayo kwihlabathi leshishini.Le ncwadana incinci yobugcisa ofuna ukuyibeka ebusweni bakho inokubonakala ipholile kwaye ithambile......
Ithetha ukuthini into yokuba isitampu sesitampu somfanekiso?
Uyaqonda ukuba ungaya nje kuGoogle igama elithi Isitampu Isitampu,andithi?
I tattoo kumfazi (ngokubanzi) umva,kwi-pelvis ephezulu.
Andikaze ndive ixesha elininzi k......
Ithi umntu otyebileyo ufumana tattoo ngamazwi.
Kuxhomekeke kubungakanani ubunzima bakho,ulahlekelwa kangakanani,ukhawuleza ulahlekelwe njani,kwaye iphi le tattoo.Ukuba ulahlekelwe ~ iipesenti ezingama-50 okanye ngaphantsi,kunokuba ayizukujika,kodwa ukuba ulahlekelwe ziipesenti ezili-100,ke khona ......
Ngaba i-tattoo kaTaehyung kwi-MV ye- 'On' engapheliyo?
Andiqinisekanga ukuba kunjalo.Umzekelo lowo wayenobuso bakhe owathi
Oku bekwindlela ye-carpool karaoke noJames Cord......
Ndiyayazi i-tattoo ihlunguzela,kodwa ungayichaza njani imvakalelo?Ngaba yoyikeka engalweni?Uhlaziyo: Ayinayo le tattoo ayonakalanga.Enkosi bafana.
Yonke tattoo iyakrakra,kodwa ziyahlukahluka kubunzima bomntu kunye nendawo akuyo.
Imigaqo ngokubanzi yesithupha:
Ukuba ingaziva imnandi inokuziva imbi nyani.
Iindawo \_"ezinamanzi\_" zenzakalisa ngaphantsi kweendawo \_"zebhoney\_".